fluorafinil (fladrafinil) ntụ (CRL-40,941) (90212-80-9) ≥98% | AASraw
fluorafinil (fladrafinil) ntụ ntụ (CRL-40,941)
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / fluorafinil (fladrafinil) ntụ ntụ (CRL-40,941)
SKU: 90212-80-9. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike sitere na gram na usoro nchịkwa nke fluorafinil (fladrafinil) (CRL-40,941) (90212-80-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
fluorafinil (fladrafinil) ntụ ntụ (CRL-40,941) video
fluorafinil / fladrafinil ntụ ntụ (CRL-40,941) bụ isi agwa
aha: fluorafinil (fladrafinil) ntụ ntụ (CRL-40,941)
Molekụla Formula: C15H13F2NO3S
Ọbara arọ: 90325.33
fluorafinil / fladrafinil ntụ ntụ (CRL-40,941) na nje SMART
CRL-40,941 bụ aha fladrafinil ma ọ bụ fluorafinil.
Fluorofinil ntụ ntụ (CRL-40,941) Uji
Ụdị kachasị na gburugburu 30 ka 100 mg kwa ụbọchị, na 200 mg bụ oke kachasị na oge 24. Ọ bụ ezie na mmetụta ọjọọ sitere na CRL-40,941 na usoro ọgwụgwọ nkịtị dị oke ụkọ, ihe mgbaàmà kachasị emetụta yiri modafinil na ihe ndị ọzọ na-akpali akpali ma na-agụnye isi ọwụwa, nhụbiga oke ókè, mgbagwoju anya, mmegide, vasoconstriction na afọ ojuju afọ.
CRL-40,941 dị dịka nchọpụta nchọpụta nke na-eme n'ọtụtụ dị elu nke ndị ọrụ ntanetị dị ntanetị dịka TPR Power, Noonauts, RC Planet, na NutriAvenue na US. A na-achọta ndị ọzọ nootropics yiri CRL-40,941 na PowderCity.
Kedu Ụdị Nsonaazụ M Kwesịrị Ịtụ Anya na Fladrafinil ntụ ntụ (CRL-40,941)
Ihe ọma dị mma nke Fladrafinil ntụ ntụ na-agụnye ncheta a na-emewanye nke ọma, nghọta doro anya ka ukwuu, ọganihu dị elu na ọkwa dị elu nke gburugburu igwe. Dị ka ọ dị mma ilekwasị anya, ọ nwere ike iji ya na ịgwọ ọnọdụ ndị dị ka ADHD, Alzheimer na ịda mbà n'obi. O nwekwara ihe dị ukwuu n'ịgwọ ọrịa ndị na-ehi ụra, dị ka ehighị ụra ma ọ bụ narcolepsy.
Fladrafinil raw ntụ ntụ na-emekarị ka ọ bụrụ ihe dị n'etiti iri atọ na otu narị azụ kwa ụbọchị. Onu ogugu kachasi elu bu ubochi abuo na otu ubochi ma nke a agaghi agabiga. Mmetụta dị iche iche dị obere mgbe a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe dịka ntụziaka ndị a na oge mkpirisi. Ihe mgbaàmà ndị a na-akọkarị bụ isi ọwụwa, mgbakasị, mgbakasị, nkwarụ, mkpesa afọ na vasoconstriction.
Fladrafinil raw ntụ ntụ na-eje ozi otu ọrụ ahụ dị ka adrafinil; iji mee ka ndị mmadụ na-amụ anya ma na-amụ anya. A maara nke a na-eme ka elekwasị anya na ike ọgwụgwụ, na-egosi na ndị ọrụ ya na-arụpụta ọrụ ka ukwuu.
Uru bara uru nke Fladrafinil ntụ ntụ n'elu ọgwụ ndị yiri ya bụ ike ya. E gosiputara na ọ dịkarịa ala okpukpu abụọ karịa ike dị ka adrafinil. Ọ bụ nhọrọ dị oke mma na usoro gị na-amalite ịnakwere adrafinil ma ọ bụ ndị ọzọ, ọgwụ ndị yiri ya. N'oge mmepe ya, e kwuru na Fladrafinil ntụ ntụ nwere ike belata iwepụ. Maka ọgwụgwọ ọrịa ọrịa hyperactivity, ihe ndị ahụ dị jụụ nwere ike inwe mmetụta dị mma na nlekota anya nke ọgwụ ahụ na-akwalite.
Ịdọ aka ná ntị na ntụ ntụ fluorafinil
ọ bụghị FDA ka akwadoro ozi ahụ dị n'elu. A naghị enye ọgwụ maka nzube nke nyocha, ọgwụgwọ, igbochi ma ọ bụ ịgwọ ọrịa ọ bụla ma ọ bụ ọrịa. Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa ọ bụla, jụọ onye ọrụ ahụike mgbe niile tupu iji Fladrafinil ntụ ntụ ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla ọzọ. Ejila Fladrafinil uzuzu mee ihe n'enweghị nlekọta ahụike ọzọ ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta ọ bụla.
Aha ọzọ maka Fladrafinil ntụ ntụ bụ fluorafinil ntụ ntụ na aha ya bụ CRL - 40 941. A na-ekewa ya dị ka eugeroic na ihe ọ na-eme na-akwalite ịdị mma. O yiri nkea na nghota na mmetụta ya na modafinil na adrafinil. Otú ọ dị, ọ na-ebukwa mmeghachi omume na-eme ihe ike ma ọ bụrụ na ọgwụ abụọ ndị a adịghị.
N'ihe dị na ya, Fladrafinil raw ntụ ntụ bụ mmepụta adrafinil, nke bụ ihe mgbakwunye bis (p-fluro). Mmetụta ndị ọzọ iji mee ka ọ dị mma gụnyere ịgbatị ume. Fladrafinil ntụ ntụ na-emekwa ka arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme ka ncheta dị elu, ma na-enwekwu ọchịchọ. Ọ na - emetụta mmetụta ndị a site na ọrụ metụtara histamine na dopamine neurotransmitters.
A maara Fladrafinil raw ntụ ntụ ka ọ dị obere ka ọ ghara inwe mmetụta dị nro, ma ọ bụrụ na a na-akwado usoro ọgwụgwọ na ugboro ole na ole n'ogologo oge. Ekwesighi iji ọgwụ a eme ihe maka ojiji ozo. Iji ya mee ogologo oge, ma ọ bụ nkwụsịtụ, nwere ike imerụ ụbụrụ. Dịka ọgwụ ahụ na-eme n'ime oge mbụ synaptic dịka onye na-emegharị ihe, ma norepinephrine na dopamine, ọ nwere ike ịmepụta nsogbu yiri ya. Dịka ọmụmaatụ, iji mee ogologo oge nwere ike ọ gaghị emetụta ọrụ ndị a na-ahụ maka ọbara na-ebute ọnya ụbụrụ ọbara.
Fladrafinil ntụ ntụ dị atọ ruo ugboro anọ karie adrafinil. A na-atụ aro na mgbe ịmalite ọgwụgwọ na Fladrafinil raw ntụ ntụ, a ga - eji ihe dị ka iri atọ na iri na isii ruo elekere iri na isii. N'iji ya tụnyere, a na-ewere usoro ọgwụgwọ dị otú a dị oke ala n'ihe banyere adrafinil. Ntughari mmeghe nke Fladrafinil uzuzu kwesiri ka eji nwayo nyochaa dika usoro gosiputara ikwebata ogwu. Otú ọ dị, ọgwụ kachasị mkpa ekwesịghị ịdị ukwuu karịa narị abụọ azụ kwa ụbọchị.
CRL-40,941 kaa ntụ ntụ
fladrafinil / fluorafinil ntụ ntụ (CRL-40,941) Marketing
Fladrafinil / fluorafinil ntụ ntụ (CRL-40,941) nwere mmetụta ọ bụla
Enweghi ederede nke nsogbu kachasị na-eme n'ihi iji Fladrafinil raw ntụ ntụ dịka ndenye ọgwụ. Otu n'ime ihe ndị na-akpata obere oge bụ na ọgwụ ahụ na-enye ísì ísì ísì ísì. Enwekwara ike na ọgwụ ọjọọ ahụ nwere ike ime ka ọ daa na arịa ọbara, ọnọdụ a maara dị ka vasoconstriction. Ụfọdụ na-akọ na a ga-achọta ọnọdụ ndị dị n'Ịntanet na mmetụta ndị a na-emetụta ọbịbịa ọgwụ ahụ. E nwebeghị ihe àmà na-enye ahụike na mmetụta dị otú ahụ na-esi na Fladrafinil uzuzu pụta.
Esi zụta CRL-40,941: zụta fladrafinil ntụ ntụ: ịzụta fluorafinil ntụ ntụ sitere na AASraw
CRL-40,941 Ntụziaka ntụ ntụ ntụ ntụ
1 nyochaa maka fluorafinil (fladrafinil) ntụ ntụ (CRL-40,941)
fluorafinil (fladrafinil) uzuzu (CRL-40,941) bu ihe omuma
CRL-40,940 (ntụ ọka BisfluoroModafinil)